N'afọ 2007, onye na-ese foto a ma ama Carol M. Highsmith nyere ọba akwụkwọ nke Congress akwụkwọ ndụ ya niile. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, Highsmith chọpụtara na ụlọ ọrụ na-ese foto nke ụlọ ọrụ Getty Images nọ na-akwụ ụgwọ ikikere maka iji ihe onyonyo ọha na eze a, na-enweghị nkwenye ya. Ya mere, ọ gbara akwụkwọ ikpe maka ijeri $ 1, na-azọrọ mmebi iwu nwebisiinka ma na-ebo ebubo oke ojiji na aha ụgha nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ foto 19,000. Courtslọikpe adịghị akwado ya, kama ọ bụ
Na-eji Social Check-Ins maka Predictive Retail Analysis
Anyị emeela ọtụtụ nyocha na ụlọ ọrụ anyị na ụlọ ọrụ ndị mepụtara nnukwu ụlọ nkwakọba ihe nke data bara oke uru. Ọtụtụ mgbe, ụlọ ọrụ ndị a na-ama aka ka ha nwekwuo mmetụta nke ahịa ha, na-eto eto ahịa ha, ma na-eme ya dabere na ngwaahịa na onyinye ha. Mgbe anyị gwuru ntakịrị n'ime nyiwe ha, agbanyeghị, anyị ga-ahụ na ha achịkọtala data nke data ejibeghi. Lee ụfọdụ ihe atụ n'ime Email Marketing
Kedu ihe ndị ọkachamara na-elekọta mmadụ na-elekọta mmadụ na-elekọta mmadụ maara na anyị niile nwere ike ọ gaghị edocha anya? ReferralCandy gwuru n'ime data site na ebook kacha ọhụrụ nke Jay Baer, ​​Social Pros All-Stars: Career Paths & Tips si 27 Big Company Social Media Professionals iji hụ ma anyị nwere ike ịchọta usoro ọ bụla bara uru. Ihe omuma a gunyere ntuziaka banyere iguzobe mgbasa ozi gi na ndi mmadu, na-eto eto ndi na-ege gi nti, iwulite obodo na amamihe zuru oke banyere i nochite anya ika gi